Qorshe dib loogu celinayo barakacayaasha - BBC Somali - Aqoon Guud
Qorshe dib loogu celinayo barakacayaasha
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 31 Maarso, 2013, 20:30 GMT 23:30 SGA
Waxaa qorshahan la doonayaa in dadka loo sameeyo tuulooyin ay ka helaan iskuulo, adeeg caafimaad iyo guryo.
Boqolaal kun oo qof aya aku barakacay Soomaaliya gudaheeda.
Magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay shir looga hadlayay sida dadka soo barakacay ee ku jira xerooyinka dib loogu celin lahaa deegaanadii ay ka yimaadeen, iyo wixii ka qabsoomay qorshayaashii hore ee dib u celinta.
Waxaa shirkaasi soo agaasimay Ururka Iskaashiga Islaamka ee OIC, waxaana ka qayb galay ilaa afartan hay'adood oo ah kuwa samafalka iyo saraakiil ka socotay wasaaradda arimaha gudaha.
Wariyaha BBCda Ibrahim Maxamed Aden, ayaa markii uu shirku soo dhamaaday waxa uu waraystay Zahra Cali Xasan, oo kamid ah saraakiisha ururka Iskaashiga Islaamka OIC ee shirka soo abaabulay. Waxuuna waydiiyay hadafka ay ka lahaayeen kulanka.